Sexy Low Waist ဘရာဇီး Thong Bikini ရေကူး - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
sexy အနိမျ့ခါးလောက်ဘရာဇီး Thong ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ရေကူးသတ်မှတ်မည်
$13.84 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $21.98
အရောင် စိမ်းလန်းသော ပန်းရောင် လိမ္မော်သီး ဝါသော မီးခိုးရောင် yellow1 ပုံနှိပ် အဖြူ Black က အဝါရောင်2အနီရောငျ
S / အစိမ်းရောင် M / အစိမ်းရောင် L / အစိမ်းရောင် S / ပန်းရောင် M / ပန်းရောင် L / ပန်းရောင် S / လိမ္မော်ရောင် M / လိမ္မော်ရောင် L / လိမ္မော်ရောင် S / အဝါရောင် M / အဝါရောင် L / အဝါရောင် S / Grey M / Grey L / Grey က S / yellow1 M / yellow1 L / yellow1 S / ပုံနှိပ် M / ပုံနှိပ် L / ပုံနှိပ် S / White, M / White, L / White, S / Black က M / Black က L / Black က S / အဝါရောင်2M / အဝါရောင်2L / အဝါရောင်2S / Red M / Red L / အနီရောင်
Sexy Low ခါးဘရာဇီး Thong Bikini ရေကူးဝတ်စုံ - S / Green backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Pad နှင့်အတူ: အဘယ်သူမျှမ
ပစ္စည်း: နိုင်လွန်ခြင်းနှင့် Spandex
မှတ်ချက်: ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောမော်နီတာနဲ့အလင်းသက်ရောက်ခြင်းငှါ, ကို item ၏အမှန်တကယ်အရောင်ပုံထဲမှာပြသအရောင်ကနေအနည်းငယ်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! 1-3cm လက်စွဲစာအုပ်တိုင်းတာခြင်းကြောင့်သွေဖည်တိုင်းတာခြင်းကိုခွင့်ပြုပေးပါ။
супер။ пришлобыстроза 17 дней။ спб.размерицветсоответствует။
အံ့သြဖွယ်ပင်ပိုပြီးတောက်ပနှင့် pictyre ထံမှ beutifull ကျေးဇူးတင်စကား! ယင်း၏ဒီစတိုးဆိုင်နှင့် im မှငါ့ဒုတိယအကြိမ် im သာသနာကိုအလွန်ပျော်ရွှင်
ရေကူး၊ ဓာတ်ပုံ၊ အရောင်နှင့်ထည်ကဲ့သို့အရွယ်အစားသေးသေးများသာရေကူးဝတ်စုံသည်အလွန်ကြီးသည်။ D ခွက်မှာ L ကိုအမိန့်ပေးပေမယ့်သေးငယ်လွန်း နှင့်အောက်ခြေလည်းတင်းကျပ်စွာ။ ကျွန်ုပ်သည် ၅၆ ကီလိုဂရမ်ရှိပြီး ၉၄-၉၆ စင်တီမီတာ ရှိ၍ အရွယ်အစားဇယားတွင် XL ရှိသင့်ပါသည်။
Отличныйкупальник, яввосторге, сидитотлично) သင်ကျေးဇူးတင်
လှပသော, ကဝတ်ဆင်ရန်စောင့်ဆိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ် !! အစာရှောင်ခြင်းပို့ဆောင်မှု။ ကြိုက်တယ်